Maitiro ekudzoreredza iyo Dhawunorodha folda kubva kuDock kana isu tazvidzima | Ndinobva mac
Kana kurodha pasi chero faira kubva paInternet, zvese zvirimo zvirie yakachengetwa yakananga muDownloads folda, dhairekitori iyo isu yatinogona kuwana zvakananga kubva kuDock, sezvo iri padyo nebhureki remabhini. Nekugara uine dhairekitori nguva dzose iri padhuze, hazvidi kuti utarise iyo Tsvaga uchitsvaga mafaera akarodha pasi kana kuona kuti padiki padiki desktop yedu iri kuzadza nemafaira, mune dzakawanda zviitiko zvisina basa. Asi ko kana iyo yekurodha faira yakadzimwa netsaona? Kuburikidza neKutsvaga isu tinokwanisa kuiwana, asi izvo zvinotoda kuti isu tiite zvinopfuura nhanho imwe kuti tirege kukurumidza.
Neraki, iri dambudziko diki rine mhinduro yakapusa. Iyi mhinduro ndiyo imwe chete yatinogona kushandisa kuisa muDock chero dhairekitori iyo yatinoda kugara tiinayo nekumira kuvhura iyo Yakasarudzika Tsvaga kuti igare ichiwana dhairekitori imwechete. Kuisa Dhairekodhi dhairekitori muDock, isu tinofanirwa kuenderera seinotevera.
Dzosera iyo Yekuodha pasi folda muDock
Kutanga tinovhura iyo Finder
Ipapo iwe enda kune yepamusoro menyu uye tinya pane iyo menyu Ir. Wobva wadzvanya pane sarudzo kudzidziswa.
Iyo Tsvaga ichatiratidza ese efaera mafolda akapihwa mushandisi wedu. Kuti tiratidze Dhawunorodha dhairekitori zvakare, isu tinongofanirwa ssarudza iyo uye dhonza kuDock, kunyanya kunharaunda kwayaimbove.
Kana tangoita oparesheni iyi, tichaona kuti sei iyo Dhawunorodha folda inoonekazve munzvimbo yepakutanga.
macOS haitibvumidze kutsvaga chero dhairekitori muApplications Dock, Naizvozvo, zvese zviri kurodha pasi folda uye chero imwe dhairekitori iyo yatinoda kuwedzera kuDock, inofanira kunge iri kurudyi kwayo, pazasi petambo yakatwasuka padivi pechishandiswa chekupedzisira chakaratidzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekudzoreredza iyo Dhawunorodha folda kubva kuDock kana isu tamboibvisa
zvakanaka kwazvo .. Ini ndanga ndadzima iro folda nekukanganisa uye ndaifunga kuti ndakanga ndarasa ruzivo .. Ndakaidzosera ndichitevera zvataurwa neshoko. ndokutenda zvikuru
Ini ndinoita aya matanho uye dhairekita rinowoneka zvakare padhuze nemarara emarara. Dambudziko nderekuti ndisati ndaribvisa netsaona, doko rekurodha dhairekodhi rakaratidza runyorwa kumusoro pamwe neazvino zvakanyanya uye ikozvino hwindo rinovhura nezvose zvakadzorwa pasina odha kana konzati uye ini handisi kukwanisa kudzokera kuhurumende yekutanga folda. Pane chero munhu anoziva kushandura dhairekodhi paMac dock kuitira kuti inyorazve kurodha pasi kwazvino kurodha pasi? Ndatenda
Camila Andrea akadaro
Ndinoda kuti kana vakupa mhinduro iwe unogona kugovana neni nekuti ndine dambudziko rakafanana ... pls
Pindura kuna camila andrea
Pane icon yakaiswa padoko uye mune yayo pop-up menyu, sarudza iyo "Fani" sarudzo pasi pe "Wona zvemukati se". Kwaziso.
Ini ndakanga ndisina kudzima dhairekodhi, handicharirangariri zvachose. Ini ndanga ndangonyangarika padoko. Neruzivo rwako, ini ndakawana uye ndikariisa iko kwazvaimbove. Ndokutenda zvikuru.
Pablo QM akadaro
Ndokutenda zvikuru! Ini ndanga ndaibvisa netsaona uye ikozvino nerondedzero yako ini ndakakwanisa kutsvaga iyo yekumisikidza icon muDock zvakare!
Pindura Pablo QM
ndokutenda zvikuru! Ini ndakangozviita muCatalina uye pasina kana matambudziko ... Kubvumbi 2020
Ini ndinowedzera kune yangu yekutaura kubva kumavhiki mashoma apfuura… Ndine dambudziko… izvozvi maforodha ari mutsamba yemavara kwete kuenderana nenguva… haashande saizvozvo? Ndinozvigadzirisa sei?
Nekukanganisa ndakabvisa dhairekitori ndikariisa zvakare muDock, asi ini handisi kukwanisa kuridzorera, uye nekudaro hazvigoneke kuwana chero chinhu. Unogona kundibatsira here? ndatenda
Isa mbeva pamusoro peya kurodha pasi folda uye tinya kurudyi mbeva bhatani. Ikoko sarudzo dzakasiyana dzekuratidzira dzinoratidzwa uye unogona kusarudza iyo Feni modhi.
Kwakanaka kuratidzira, ini ndatozviita uye dhairekodhi dhairekitori rakaonekwa muDock
ernesto alonso garcia akaroora akadaro
ndatenda rubatsiro rwakanaka
Pindura kuna ernesto alonso garcia casado
Ndatenda, zano rinobatsira kwazvo
Beat The Game, rova ​​iyo Mac App Store nhasi